Radio-active, fampiharana hihaino ny radio avy amin'ny terminal | Ubunlog
Radio-active, fampiharana hihaino ny radio avy amin'ny terminal
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka isika dia hijery ny radio-active. Ao amin'ity bilaogy ity dia misy lahatsoratra efa nosoratana momba ny fampiharana hihainoana radio amin'ny Internet toy ny Tray Radio o novakiana, ankoatra ny hafa. Radio-active dia iray amin'ireo fampiharana ireo, saingy izany no izy Nosoratana tamin'ny Python izy io ary natao ho an'ny terminal ny fampiasana azy.
Hihaino radio amin'ny Internet, ankehitriny dia misy karazana onjam-peo misy manerana izao tontolo izao izay manolotra karazana mozika rehetra. Na tianao mozika klasika, mozika pop, mozika rock, na fomba hafa, dia manana zavatra ho anao ny radio Internet, raha mbola manana fifandraisana Internet ianao.
1 Toetra ankapoben'ny radio-active
2 Mametraka radio-active amin'ny Ubuntu
Toetra ankapoben'ny radio-active
Ny fandaharana miasa avy amin'ny terminal, ary mora ampiasaina.
ankehitriny radio-active miankina amin'ny Ffplay, mpilalao haino aman-jery ivelany amin'ny filalaovana stream multimedia. FFplay dia mpilalao haino aman-jery tena tsotra sy portable izay mampiasa ny tranomboky FFmpeg sy ny tranomboky SDL. Mikatsaka ny hanafoana izany fiankinan-doha izany amin'ny ho avy ny developer.
Ho hitantsika izany radio mihoatra ny 30K no misy.
Ny fampiharana dia hamonjy ny vaovao momba ny fiantsonana farany nilalao.
Hanana ny mety hitranga isika vonjeo ny fiantsonana ankafizinay.
Hanome antsika ny mety ampio radio.
ihany koa Izany dia ahafahantsika mahita toeram-piantsonana araka ny lahy sy ny vavy, ny fiteny na ny firenena.
Ireto dia sasany amin'ireo endri-javatra amin'ny programa fotsiny. Afaka izy ireo manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny repository amin'ny GitHUb an'ny tetikasa.
Mametraka radio-active amin'ny Ubuntu
Mila FFPlay ity programa ity mba hiasa, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Afaka amboary izany fametrahana FFmpeg amin'ny rafitray, ary noho izany dia ho afaka hilalao ny feo amin'ny rafitra mifototra amin'ny Ubuntu 20.04 ianao. Mba hametrahana ity fiankinan-doha ity dia ilaina ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka:
Rehefa efa manana FFPlay ao amin'ny rafitray izahay dia afaka mametraka radio-active. Afaka manao izany miaraka amin'ny pip isika, raha mbola manana ity rafitra fitantanana fonosana ity. Ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia mila manoratra ny baiko ianao:
Afaka manao izany koa isika mametraka ity rindrambaiko ity miaraka amin'ny pipx. Ny pipx dia natao manokana ho an'ny fametrahana rindranasa satria manampy fitokana-monina izy io ary manome fampiharana azo alaina ao amin'ny akorany. Ao amin'ny rafitrao, Raha mbola tsy manana pipx ianao dia azonao atao ny mametraka azy amin'ny baiko:
Dia afaka miroso amin'ny mametraka ny fampiharana mampiasa ny baiko:
Ity baiko ity dia mametraka ny rindrambaiko ao ~ / .local / pipx / venvs / radio-active / bin ary ampio rohy an'ohatra ao ~ / .local / bin. Eto isika dia afaka mahita onjam-peo o radiôaktifa hanombohana ity programa ity. Raha toa ka efa nametraka ny fampiharana amin'ny pip, dia ho hita ao ny executables ~ / .local / bin. ny ampio ny lalana mankany amin'ny executable amin'ny PATH, ao amin'ny terminal azonao atao:
Aorian'ny fametrahana dia afaka isika jereo ny safidy misy amin'ny radio-active. Raha hijery azy, ny baiko ampiasaina dia:
Podemos milalao fiantsonana misy ny anaran'ny fiantsonana na ny UUID azy. Ohatra, mihaino Ny Bay, afaka mampiasa ny baiko isika:
Raha sendra maniry mitadiava onjam-peo ao amin'ny firenena iray, amin'ity tranga ity Espaina, ny baiko hampiasaina dia:
Rehefa hita ny gara izay mahaliana antsika dia afaka ampiasao ny anarana mba hampaneno azy:
Para esory ity programa napetraka miaraka amin'ny pipx, tsy maintsy manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka:
Raha nisafidy ny hametraka ny rindranasa miaraka amin'ny pip ianao, ao amin'ny terminal izay tsy maintsy soratanao dia ny baiko:
Hitanao a fampisehoana an'ity programa ity amin'ny Ascinema. Raha tianao ny fampiharana terminal sy mihaino onjam-peo dia tianao ny radio-active. Ny fampiasana ny fitadidiana dia tena mitsitsy, ary misy ihany koa ny asa isan-karazany. Azo alaina izany fampahalalana bebe kokoa momba ity programa ity sy ny fampiasana azy avy amin'ny tahiry GitHub an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Radio-active, fampiharana hihaino ny radio avy amin'ny terminal
Ny lokon'ny baranjely dia hanjavona ao amin'ny Ubuntu manomboka amin'ny Jammy Jellyfish
Fanafihana maherin'ny 840.000 no natomboka nanandrana nanararaotra ny lesoka Log4J